မြန်မာ နဲ့ စင်ကာပူ ခေါင်းဆောင်ခြင်း ကွာခြားမှု နှင့် တိုင်းပြည် ကောင်းစား ရေး “ဖော်မြူလာ” – Shwe Yoe
မြန်မာ နဲ့ စင်ကာပူ ခေါင်းဆောင်ခြင်း ကွာခြားမှု နှင့် တိုင်းပြည် ကောင်းစား ရေး “ဖော်မြူလာ”
Shwe Let | June 1, 2020 | Knowledge, Local News | No Comments
စင်္ကာ ပူနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရ ခင် ၁၉၆၂ ဧပြီလ ထဲမှာ နောင်အခါ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမယ့် လီကွမ်ယု မြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ် ရောက်လာတဲ့အခါ အဲဒီအခါက အာရှတစ်တိုက်လုံးမှာ အသန့်ရှင်းဆုံးဆု ပူပူနွေးနွေး ရထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို ကြည့်ပြီး တယ်လှပပြီး စနစ်ကျတဲ့ မြို့ကြီးပါလား ရယ်လို့ အားကျတဲ့အကြောင်း ချီးကျူးသွားခဲ့တယ်။
သူ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးကိုလည်း ဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ပေါ့။ နောင် ၂၄ နှစ်အကြာ ၁၉၈၆ မှာ ရန်ကုန်မြို့ကို စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ အလည်အပတ် ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူ အားကျခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ပြီး ပုံပျက်ပန်းပျက် ယိုယွင်းစုတ်ပဲ့နေပြီ.. သူ့နိုင်ငံကတော့ အာရှကျား တစ်ကောင်အနေနဲူ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ဖျားခါရလောက်အောင် စီးပွားရေး အောင်မြင်ပြီး တိုးတက်ချမ်းသာနေပြီ။
ဒီလို အောင်မြင် လာအောင် သူဘယ်လို လုပ်သလဲ? ရှင်းပါတယ်.. စင်္ကာပူနိုင်ငံ အောင်မြင်တာဟာ လီကွမ်ယုကြီးက သူ့လို လူတော်တွေ အများအပြား မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ.. သူက အစိုးရအနေနဲ့ ပဲ့ကိုင်ရုံ ပဲကိုင်ပြီး လူတော်တွေကို မောင်းနှင်စေခဲ့တာပါ။
အရင်ဆုံး နိုင်ငံသားတွေ ကို ပညာတတ်အောင်သင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခေါ် သူတို့စီးပွားရေးမှာ စင်္ကာပူသားတွေကို နေရာပေးပြီး ပညာယူခိုင်း နောင်ကျတော့ ကိုယ်ပိုင် ခွဲလုပ်ချင်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ အဲဒီမှာ စွန့်ဦးတီထွင် အသေးစားနဲ့ အလယ်အလတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပေါ်လာ သူတို့အောင်မြင်လာတော့ ကျန်တဲ့ စင်္ကာပူသားတွေကလည်း လိုက်လာ နောက်တော့ စင်္ကာပူသားတွေ လူလည်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ဥစ္စာဓန ဖော်ဆောင်နိုင် လာခဲ့တယ်။
ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုမှာ အဓိက ကွာသွား တာက လူ (ပြည်သူ) ကို အရေးထားမှု/ မထားမှုပဲ.. မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေက ငါတို့တော်ရင် တိုင်းပြည် ကောင်းစားမယ် လို့တွေးတယ် လီကွမ်ယုက သူ့နိုင်ငံသားတွေ တော်မှ နိုင်ငံချမ်းသာ မယ်လို့တွေးတယ်။
အဲဒီတော့ လီကွမ်ယု ဘာလုပ် သလဲ.. ပထမအဆင့်အနေနဲ့ လူတော်တွေ ထွက်လာအောင် ပညာရေးကို နင်းကန်အားထုတ်တယ်.. ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ နဲ့ အကျိုးတူချိတ်ဆက်ပြီး သူ့နိုင်ငံသားတွေ ကို အခွင့်အလမ်း ဖော်ပေးတယ်.. ကျန်တာကတော့ အဲဒီ နာမည်မထွက်တဲ့ လူတော်တွေကပဲ စင်္ကာပူကို တွန်းတင်ပေး လိုက်တာပဲ.. အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်ကောင်း စားရေး ဖော်မြူလာက လူတော်တွေမွေး.. အခွင့်အလမ်းပေး.. လမ်းကြောင်း မှန်အောင် ပဲ့ထိန်းပေး။ ဒါပါပဲ။
စင်ျကာ ပူနိုငျငံ လှတျလပျရေး မရ ခငျ ၁၉၆၂ ဧပွီလ ထဲမှာ နောငျအခါ ဝနျကွီးခြုပျ ဖွဈလာမယျ့ လီကှမျယု မွနျမာပွညျကို အလညျအပတျ ရောကျလာတဲ့အခါ အဲဒီအခါက အာရှတဈတိုကျလုံးမှာ အသနျ့ရှငျးဆုံးဆု ပူပူနှေးနှေး ရထားတဲ့ ရနျကုနျမွို့ကို ကွညျ့ပွီး တယျလှပပွီး စနဈကတြဲ့ မွို့ကွီးပါလား ရယျလို့ အားကတြဲ့အကွောငျး ခြီးကြူးသှားခဲ့တယျ။
သူ့ကြှနျးနိုငျငံလေးကိုလညျး ဒီလိုဖွဈအောငျ လုပျမယျ ပေါ့။ နောငျ ၂၄ နှဈအကွာ ၁၉၈၆ မှာ ရနျကုနျမွို့ကို စင်ျကာပူဝနျကွီးခြုပျအနနေဲ့ အလညျအပတျ ရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ သူ အားကခြဲ့တဲ့ ရနျကုနျမွို့ကွီးဟာ ဟောငျးနှမျးဆှေးမွပွေီ့း ပုံပကျြပနျးပကျြ ယိုယှငျးစုတျပဲ့နပွေီ.. သူ့နိုငျငံကတော့ အာရှကြား တဈကောငျအနနေဲူ့ တဈကမ်ဘာလုံးက လကျဖြားခါရလောကျအောငျ စီးပှားရေး အောငျမွငျပွီး တိုးတကျခမျြးသာနပွေီ။
ဒီလို အောငျမွငျ လာအောငျ သူဘယျလို လုပျသလဲ? ရှငျးပါတယျ.. စင်ျကာပူနိုငျငံ အောငျမွငျတာဟာ လီကှမျယုကွီးက သူ့လို လူတျောတှေ အမြားအပွား မှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့လို့ပါပဲ.. သူက အစိုးရအနနေဲ့ ပဲ့ကိုငျရုံ ပဲကိုငျပွီး လူတျောတှကေို မောငျးနှငျစခေဲ့တာပါ။
အရငျဆုံး နိုငျငံသားတှေ ကို ပညာတတျအောငျသငျ နိုငျငံခွား ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှခေျေါ သူတို့စီးပှားရေးမှာ စင်ျကာပူသားတှကေို နရောပေးပွီး ပညာယူခိုငျး နောငျကတြော့ ကိုယျပိုငျ ခှဲလုပျခငျြတဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံသားတှကေို အစိုးရက ထောကျပံ့ အဲဒီမှာ စှနျ့ဦးတီထှငျ အသေးစားနဲ့ အလယျအလတျ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှေ ပျေါလာ သူတို့အောငျမွငျလာတော့ ကနျြတဲ့ စင်ျကာပူသားတှကေလညျး လိုကျလာ နောကျတော့ စင်ျကာပူသားတှေ လူလညျတှေ ဖွဈကုနျပွီး တခွားနိုငျငံတှမှောပါ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပွီး ဥစ်စာဓန ဖျောဆောငျနိုငျ လာခဲ့တယျ။
ဒီနိုငျငံနှဈခုမှာ အဓိက ကှာသှား တာက လူ (ပွညျသူ) ကို အရေးထားမှု/ မထားမှုပဲ.. မွနျမာခေါငျးဆောငျတှကေ ငါတို့တျောရငျ တိုငျးပွညျ ကောငျးစားမယျ လို့တှေးတယျ လီကှမျယုက သူ့နိုငျငံသားတှေ တျောမှ နိုငျငံခမျြးသာ မယျလို့တှေးတယျ။
အဲဒီတော့ လီကှမျယု ဘာလုပျ သလဲ.. ပထမအဆငျ့အနနေဲ့ လူတျောတှေ ထှကျလာအောငျ ပညာရေးကို နငျးကနျအားထုတျတယျ.. ပွီးတော့ နိုငျငံတကာ နဲ့ အကြိုးတူခြိတျဆကျပွီး သူ့နိုငျငံသားတှေ ကို အခှငျ့အလမျး ဖျောပေးတယျ.. ကနျြတာကတော့ အဲဒီ နာမညျမထှကျတဲ့ လူတျောတှကေပဲ စင်ျကာပူကို တှနျးတငျပေး လိုကျတာပဲ.. အဲဒီတော့ တိုငျးပွညျကောငျး စားရေး ဖျောမွူလာက လူတျောတှမှေေး.. အခှငျ့အလမျးပေး.. လမျးကွောငျး မှနျအောငျ ပဲ့ထိနျးပေး။ ဒါပါပဲ။
လူ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ဦး မှားကြ တဲ့ ဖုန်း အား သွင်း နည်း အလွဲ များ….
အရေပြားပေါ်မှာ စွဲနေတဲ့အမာရွတ်၊ အမည်းစက်တွေ ပျောက်စေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်း (၄)မျိုး
ယနေ့ ညနေ ( ၅ )နာရီကျော် ပြည်မြို့ မှာ ရပ်ကွက် က ဝိုင်းဖမ်း လိုက် ရ တဲ့ အဖြစ်
ကိုယ်ခံ အားကောင်းစေ တဲ့ နဂါးမောက်သီး
မိုင်(၁၅၀၀)ခရီးနှင်ပြီး အဝေး ကချစ်သူ ကို Surprise လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော် လည်း
ကရင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေ ကို လှူဒါန်းရန် ထပ် မံ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြဖို့ နှိုးဆော်လာတဲ့ မီးနို
သူမတွေ့လိုက်ရတဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလာ တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ရင်ဖိုစရာကောင်းလွန်းပြီး ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ဗီဒီယို
အိုက်တင်အမျိုးမျိုးပေးပြီး အသည်းယာစရာကောင်းလောက်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ဖေဖေအာဘွိုင်း
မအလ ကောင်စီ၏ အောင်ဘာလေထီ ထိုးသူ မရှိ လို့ တစ်လ ၁ ကြိမ်ထီဖွင့် စနစ်အစား နှစ်လ ၁ ကြိမ် ထီဆုမဲ ဖွင့်စနစ် ပြောင်းလဲ